Xukuumada Oo Xabsiga Dhigtay Maayarkii Cusbaa Ee Shalay La Doortey Iyo Odayaal Dhaqameed |
Xukuumada Oo Xabsiga Dhigtay Maayarkii Cusbaa Ee Shalay La Doortey Iyo Odayaal Dhaqameed
Hargeysa (GNN):- Xukuumada somaliland ayaa
xabsiga dhigtay maayarkii ay shalay doorteen dadweynaha degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge iyo caaqil ka mid ahaa dadkii soo abaabulay munaasibadii lagu doortay.
Ciidamada amaanka oo amar adag la soo faray ayaa dhigay caaqil Xasan Ibraahin Xuseen Xirsi oo ka mid ahaa wax garadkii soo abaabulay munaasibadii ay dadweynaha degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge ku doorteen maayarka cusub.
sidoo kale ciidamada amaanka ayaa gacanta ku dhigay maayarka cusub ee degmooyinkaasi Xuseen Shabeel, kaas oo ilaa haatan aan si rasmi ah loo shaacin halka lagu xidhay.
Sidoo kale wararla helaayo ayaa sheegaya inay jiraan dad kale oo la xidhay, kuwaas oo lala xidhiidhinayo dhacdadii maanta lagu doortay maayarka degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge, kuwaas oo ilaa hada aan la sugin tiradooda rasmiga ah.
iyada oo dadweynaha degmada Axmed Dhagax ay hormood u ahaayeen kacdoono lagaga soo horjeedo maayarka magaalada Hargeysa, ayey degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge ku dhiiradeen inay doortaan maayar degmooyinkaasi maamula balse dad badan ayaa is waydiinaya sababta loo bartilmaameedsanayo xubnahan la xidhay oo ka soo jeeda beelaha Garxajis.